पत्रकार सँग किन जंगिए उर्लाबारीका मेयर फागो ? - Purbeli News
पत्रकार सँग किन जंगिए उर्लाबारीका मेयर फागो ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २५, २०७५ समय: १३:०५:१४
उर्लाबारी । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले जेठ २२ गते नगरपालिकाको हाताभित्र भएको घटनाको केही पत्रिका र पत्रकारले अतिरञ्जित तरिकाले समाचार प्रकाशन गरेको बताएका छन ।
पत्रकारले उपमेयरको किन बचाउ गरेका ? पत्रकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ ! राजनितीक ढंग बाट चल्ने हो भने पत्रकारीता छोड्दा हुन्छ । सत्यताको गहिराईमा नै नपुगी ती पत्रिका र पत्रकारले हावादारी समाचार प्रकाशन गरेका छन भन्दै फागो पत्रकार सँग जंगिएका हुन । जेष्ठ २३ गते उर्लाबारीको एक सञ्चार माध्यायमले मेयरको बडिगार्डले सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको शीर्षकमा झूठो समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै नगर प्रमुख फागोले यस्तो बताए ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा भएको वादी र प्रतिवादीबीच भएको वादविवादका क्रममा उनीहरुका आफन्तबीच सामान्य घटना भएको तर केही पत्रकारले सामान्य घटनालाई पहाड बनाएर पत्रिकामा अतिरञ्जित तरिकाले मेरो बदनाम गर्न राजनितीक तवरले समचार प्रकासन गरेको मेयरले बताए । संचार माध्यममा आएको जस्तो घटना नभएको उहाले बताउनुभयो । फागोले घटना भएको समयमा आफू कार्यालयमा नभएको तर उक्त समयमा नगर परिसरमा हात हाला हाल नभएको, पछि आफूले सो घटनाका बारेमा जानकारी पाएको र नगरिालिकामा भएको सिसी क्यामरामा त्यस्तो घटना नभएको मेयरले दाबि गरे । उनले सत्यतथ्य समाचार प्रकाशन गरी जनतालाई सू–सुचित गर्न समेत सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका छन ।
यसैबीच न्यायिक समितिका सदस्य निरोज तिम्सिनाले वादी र प्रतिवादीका आफन्तहरु बीच हात हालाहालतको स्थिति सिर्जना भएको र मेयरको बडिगार्डले सेवाग्राही माथी त्यस्तो ब्यवहार नगरेको बताएका छन । ‘वादी र प्रतिवादीको आफन्तबीच झगडा हुँदा नगरपालिकाकै एक सदस्यले माहोर शान्त पार्न अनुरोध गर्दा सुरक्षा गाडले छुट्टयाएको मात्र हो, हातपात गरेको होइन’, तिम्सिनाले भने ।
पूर्वका यि शहरहरूमा द भ्वाइस अप नेपालको लाइभ कन्सर्ट
असल अभिभावक, शिक्षक र बिध्यार्थी संबन्धी ३ दिने प्रशिक्षण सम्पन्न ।
विधायलयमा एल इ डी र सुईटर वितरण
पथरीमा कृषि विउ विजन र उपकरण वितरण
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा १ घण्टा चर्काचर्की
प्रथम नगर महिला फुटवतको उद्धघाटन खेलमा कानेपोखरी विजयी
पथरीशनिश्चरे न्यायपालिका आफै धामी आफै बाेक्सी, पथरीशनिश्चरेकाे न्यायीक समिती नै जग्गा दलाली
मोरङको लेटाङमा खुल्याे नेफ्स्कुनको सम्पर्क कार्यलय
५ औं मिस्टर मोरङलाई सम्मान